Inspektur fiarovana, mpanampy Android ho an'ny fizahana | Androidsis
Mailen bravo | | Fampiharana Android
Mpanara-maso ny fiarovana avy amin'ny Plinius Solutions dia rindranasa vaovao ho an'ny Android natao hametrahana fanaraha-maso fiarovana sy hizara vaovao amin'ny fomba haingana sy voarindra, manararaotra tanteraka ny fahafahan'ny teknolojia finday avo lenta na takelaka.
Ny programa dia miasa ho manatsara ny ora sy ny kalitaon'ny fanaraha-maso, manararaotra ireo toetra ara-teknikan'ny telefaona finday, manomboka amin'ny fakantsary ka hatramin'ny mikrô.
Ny Security Inspector dia manana modely samihafa efa voaomana izay alehantsika manamarika ireo lafiny samihafa hodinihina. Amin'izany fomba izany dia manafaingana ny fizotran'ny fanamarihana lesoka, teboka tsara ary hevitra momba ny fitsidihanay ny modely namboarina.
Tsy fangatahana ho an'ny besinimaro izy io, fa mpanampy natao ho an'ireo izay manao fanamarinana fiantohana na fanaraha-maso ny fiarovana any amin'ny orinasa, atrikasa ary ny toy izany, ary mba hitrandrahana tsara indrindra dia tsara kokoa ny manazatra kely mba tsy manadino anay tsy misy amin'ireo fitaovana lehibe ao anatiny hanatsarana ny zava-bitantsika.
Miaraka amin'ny Inspector Safety dia afaka manampy sary sy fanehoan-kevitra amin'ny lafiny samihafa amin'ny fizahana isika, mamorona modely manokana misy ireo toetra tokony hohadihadiana, ary misy aza ny fanaovana sary hanasongadinana ireo lafiny manan-danja na manampy antsipirihany amin'ny fomba manokana.
Misaotra anao rafitra mailaka tafiditra, Security Inspector dia mamela anao hizara ny valiny amin'ireo mpanjifanao sy mpiara-miasa aminao haingana. Izy io dia miasa miaraka amin'ny rafitra sonia niomerika ho an'ny fizahana vita ary koa ireo asa samihafa dia karakarain'ny fanjakana, ny daty na ny toerana iasana.
Amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ny rafitra fitantanana Plinius Health & Safe Management dia hahafahantsika mampakatra sy misintona asa, mamorona modely manokana ary hitahiry azy ireo ho an'ny fizahana amin'ny ho avy na mamorona lisitra samihafa miaraka amin'ny fanaraha-maso vita, ireo mbola tokony hatao na ireo izay natombotsika fa mbola tsy vita ..
Safidy maro hanamorana ny asan'ny mpanara-maso manararaotra ireo teknolojia vaovao tafiditra ao amin'ny smartphone. Ny Security Inspector dia ao amin'ny kinova 1.0 ary fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android.
Miasa amin'ny kinova Android 3.0 sy ambony, ka ny takelaka sy finday ho an'ny taranaka manaraka dia afaka manararaotra an'io mpanampy mpanara-maso miavaka io mba hanafainganana ny asany. Izaho manokana dia nandefa ilay programa aho saingy afaka minitra vitsy dia tsapako fa tsy afaka mahazo tombony be indrindra amin'ireo fitaovana marobe izy satria fampiharana natao ho an'ny asa manokana.
Fanazavana fanampiny - Apalabrados, ny lalao alaina indrindra ao amin'ny Google Play Store
Loharano - Plinius
Ampidino - Mpanara-maso ny fiarovana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Inspektur fiarovana, fanaraha-maso avy amin'ny finday
Ahoana ny fametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Samsung Galaxy R i9103
Ampidino rom Samsung Galaxy S Doc's Master ICS V12